Ifakwa phi i-Msxml DLL? - Faq
Eyona > Faq > I-Msxml dll engekho - iimpendulo kwimicimbi
I-Msxml dll engekho - iimpendulo kwimicimbi
Ifakwa phi i-Msxml DLL?
Kwimeko ezininzi, isisombululo kukufaka kwakhona ngokufanelekileyomsxml.njlkwi-PC yakho, kwifolda yenkqubo yeWindows. Ngenye indlela, ezinye iinkqubo, ngakumbi imidlalo yePC, ifuna ukuba ifayile ye-Njlifayile ibekwe kumdlalo / kwisiceloufakeloifolda.
Ndiyifaka njani iMsxml DLL kwiWindows 7?
Indlela yoku-1:IyafakaiMsxml. njlIthala leencwadiIWindowsIkhonkco loLawulo lweNkqubo
Ifayili oza kuyikhuphela yifayile ecinezelweyo nge '.
Uya kubona ithala leencwadi eligama lingu 'Msxml.
Cofa i 'Khipha ku ' uphawu olumakwe emfanekisweni.
Ukuba usebenzisa indlela yokusebenza eyi-64 Bit, khuphela 'Msxml.
Kule tutorial, ndiza kukubonisa indlela yokwakha kunye nokuhambisa imifanekiso.
Vala imifanekiso oyifunayo kwiikhompyuter ezinokuqhuba iWindows 7. Enye yeekhompyuter kufuneka ingabinanto ukuze sikwazi ukuyifomatha kwaye siyisebenzise ukwakha umfanekiso wethu. Sifuna 2 4 gigabyte flash drives 8 gigabytes prefte byte We need Windows7 installation disk and we need one of 4 gig flash drives to use ngokukhululekileyo Uya kwenza i-WindowsPE yesiqhelo i-disk yediski ngesifundo sam kunye ne-4 gigabyte flash -Drive we Ndiza kwenza ngolu hlobo lwam Ezinye iitutorials ngoku ndiza kubonelela ngekhonkco kwinkcazo, ukuba awunayo ikopi, iphepha-mvume lewindows77 liya kukhethwa kwesi sifundo njengoko kulungiselelwe ukuthunyelwa kwesi sifundo ngoku ndisebenzisa Ilayisensi yovavanyo lobuchwephesha onokuyifumana kwi-technic Microsoft comm oku kulunge kakhulu kuvavanyo lokuthunyelwa kwaye akukho mngcipheko ekubeni ungazama oku ukuba awunayo ilayisensi yeWindows 7 masihambe, qalisa idiski yokufaka kwaye siza kufaka iWindows 7 kwikhompyuter yethu ekubhekiswa kuyo okanye kwikhompyuter yethu apho siza kwenza khona umfanekiso, ke sizakwenza ufakelo olucwangcisiweyo, awunyanzelekanga ukuba wenze nantoni na oyithandayo kwaye wakube uphumile amava ebhokisi-eza kuthi Ndiza kuyinika okwethutyana Faka igama lomsebenzisi kunye negama lekhompyuter.
Sizakukusetha kwakhona kamva kwisifundo kwaye sithumele ulwazi oluthile okwethutyana ayinamsebenzi nokuba ubeka ntoni apha ke ndiza kuqhubeka ndiyenze kwaye emva koko iya kuthumela iWindows xa sele yenziwe. Siza kufaka zonke izicelo zethu esizifunayo kwikhompyuter yethu xa sisenza umfanekiso weWindows, indlela ekhawulezayo yokwenza oku kukuvula isikhangeli sewebhu. Zulazula uye kwi-9 Icom Le webhusayithi intle eyenza ukuba ukufakwa kwesiko kube nokufaka usetyenziso oluninzi ngaxeshanye kwaye kukho iitoni zezicelo onokukhetha kuzo kulo mzekelo xa ndiqhubeka xa ukhetha umthunywa weFirefox, vula iOfisi iTunes kunye windows antivirus kwaye uqaphele itoni yezinye izinto onokukhetha kuzo apha le yindlela ekhawulezayo yokufaka zonke izicelo zakho ezingagqibekanga ukuze sikwazi ngoku ukubona ukuba xa sele ufake ezo zicelo akufuneki ukhathazeke malunga noseto okanye nantoni na kuba siya kuseta yonke into xa sisenza umfanekiso wethu kwaye sisixhobo esihle kakhulu sokucinezela ngendlela eyi-is7-zip isimahla ngokungafaniyo ne-Aria sisoftware elungileyo ngokwenene xa unayo yonke siza kucofa kwaye siza kufaka zonke izicelo zethu , kulungile, kwakamsinya nje ukuba uyifakile yonke into, siya kwenza umfanekiso wethu ngokubanzi kwaye sikwenze oku.
Kukho isiphene kunye nesixhobo esisisebenzisayo ukwenza ngokubanzi kwaye kuya kufuneka uye kuMphathi weSebenzi kunye neSlice ubonise zonke iinkqubo ezivela kubo bonke abasebenzisi kwaye kufuneka sibulale yonke inkqubo eqhuba iWindows Media Player kuba ulawulo lwamalungelo edijithali lunokungqubana. nge-Sysprep Inkqubo esiza kuyisebenzisa kungekudala, ukuba sikhetha zonke iinkqubo ezenziwa yiWindows Media Player siya kuhamba siye phambili kwaye sibuyele umva windows windows back slash system 32 back plussysprep siza kuya kwifolda ye-sisprep kwaye emva koko Oko, siya kubuyela kwangoko kuMphathi weSebenzi kwaye sibulale zonke iinkqubo ezisebenzisa iWindows Media Player, kwiimeko ezininzi iya kuba yinkqubo yenethiwekhi ukuze ibulale loo mntu kwaye emva koko i-sysprep kwaye siyakuphucula uphicotho-zincwadi lwenkqubo imowudi ukuze sikwazi ukucoca inkqubo yethu kwaye siyakusula ngokubanzi ukuze sikwazi ukuyifaka kwikhompyuter nganye kwaye emva koko siza kujonga ukuba inkqubo ayizenzi kwakhona kwaye siza kucofa um ok ke emva koko izakusebenza apha malunga nemizuzu eli-10 ke kufuneka ube nomonde kodwa nje ukuba sikwimo yophicotho lwenkqubo iya kungena njengomlawuli kwaye siyakucima iakhawunti yethu yomsebenzisi wethutyana ukuze singene kwiprofayile yomsebenzisi apha kwaye siya kukhetha igama lomsebenzisi lokwexeshana kwaye upholise igama lomsebenzisi ukuze sikhethe nje ukucima kwaye kulungile ewe kwaye Kulungile kwaye emva koko siya kukhompyuter kunye neqhosha le mouse kwaye ukhethe Lawula kwaye siza kucima ungeno olukhoyo. Ke yiya kubasebenzisi bengingqi kunye namaqela, cofa kabini kubasebenzisi kwaye emva koko siyakucima oku ngoyaba zonke izilumkiso ok xa oku kwenziwe sizakuyivula yonke into kwakhona kwaye siya kwenza ezinye izinto ezahlukileyo kancinci ukuze uvule ngoku iSysprep Nantsi iC Colonbackslash yeWindows Back Back System32backslash Sysprep kwaye ngeli xesha siza kwenza ukuba amava ebhokisi aphume, eyokwamkelwa okukhethekileyo endikubonisileyo ngaphambili kunye nalapho singena khona igama lomsebenzisi, siphinda sikwenze kwakhona kwaye emva koko, xa une ikhompyuter kunye nolungelelwaniso lwakho olufunwayo kwaye usebenze amava angaphandle kwebhokisi, siya kuqala kwiWindows PE kwaye ngomfanekiso X siya kuwubamba umfanekiso kwifayile ye-wim. Ngenisa umfanekiso we-Econ Backslash Xforward Slash indawo exinyiweyo Indawo yokuBuyela umva indawo Khangela indawo ebuyileyo traps isiqingatha segigabytes ngokobukhulu, kodwa kuxhomekeke kwinani lesoftware ofuna ukuyifaka kufakelo lweWindows kwiWindows kunokuba ngaphezulu, ke ndincoma ukusebenzisa i-8 gigabyte drive endaweni yeegigabytes ezine ozisebenzisayo ngakumbi ukuba ubusele ufakele imithombo yeendaba kunye / okanye uhlaziyo oluninzi kuqwalaselo lwakho.
Ngoku ifayile yeWIM yile iyithethayo kwidiski yofakelo lweWindows, kwaye umsebenzi we-setup.exe kukuqaqambisa ifayile yeWIM, uyivule iziphu, kwaye uyifihle kwihard drive yakho ukuze ufakelo lweWindows luhlale kwifayile yeWIM. Ke into esiza kuyenza sakube sinalo mfanekiso apha siza kuthatha indawo ye-wim fayile, shiya ifayile yesiseko ekwiWindows 7 yokufaka idiski, kwaye siza kubeka eli nqaku ukufaka ifayile endaweni yayo ukuze sikwazi nje ukuba sigqibe ukuthatha umfanekiso oza kuthatha malunga neyure.
Siza kuba nayo iWindows 7 yokufaka i-drive kunye neWindows PE drive phantsi kweWindows 7 yokufaka i-drive phantsi kweMithombo. Siza kucima ifayile yokufaka okungagqibekanga, emva koko siya kwiWindows PE disk yethu kwaye kuya kufuneka ubone ukufakelwa kwale fayile ye-wim kulawulo lweengcambu apho sayithatha kwaye siya kuyikopa okanye siyinqumle kwaye siyincamathisele kufakelo lwethu disk kwaye intle kakhulu. Ngoku unesiko lokufaka iWindows 7 yediski ekufakela zonke iinkqubo zakho ozigcinileyo emfanekisweni kwaye oku kuluncedo kakhulu ekudaleni izinto ezininzi okanye ukugcina ixesha ukuba ufuna ukwenza uhlengahlengiso kunye nenkcazo yolunye ulwazi enkosi ngezifundo ezininzi, nceda uye kwi-TK's Hacker Journal
Ndiyibhalisa njani iMsxml DLL?
njlukusuka kwikhompyuter esebenzayo ukuya ku-C: \_ Windows \_ isikhombisi senkqubo kunyebhalisakubo ngomyalelo REGSVR32 C: \_ WINDOWS \_ SYSTEM \_I-MSXML.Njl.
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje, ndiza kukubonisa ukuba wenzeni xa uzama ukuphucula inkqubo yakho yeWindows kwaye ufumana le mpazamo 0x80070490 kunye nendlela yokulungisa.
Impazamo iqhelekile xa abasebenzisi bezama ukufumana inguqulelo yeWindows yeWindows ngenkonzo yoHlaziyo lweWindows. Kutheni uyibona yenye yezona zinto zibangela le mpazamo 0x80070490 ngamacandelo onakalisiweyo kuMphathi wePhakheji yokuSebenza ngokuSekwe kwiCandelo. Njengomphumo womonakalo, isifakeli sinokuthintela ukuba ungagqibi uhlaziyo ukuze inkqubo ingayi kuhlaziywa ngaphandle kokuba umsebenzisi athathe amanye amanyathelo ongezelelweyo Ukongeza kwiWindows 10, iinguqulelo ezidlulileyo- iWindows 8 kunye ne-7- nazo ziyathanda lo mbandela.
Kukho iindlela ezininzi onokusebenzisa ngazo uHlaziyo lweWindows kwiWindows ukusombulula ukhuphelo lwakho kunye nokufaka ingxaki yokuhlaziya. Usebenzisa Isixhobo Sokukhangela Isixhobo seFayile usebenzisa isiXokelelwano seFayile sokuKhangela isiXhobo, isixhobo esakhelweyo sokufumana kwakhona iifayile zenkqubo eyonakeleyo. Ukuyiqala kufuneka usebenzise i-Command Prompt.
Ukwenza oku, ngenisa 'cmd' kwibhokisi yokukhangela kwaye c cofa ukuze uyiqale njengomlawuli. Kwiwindows yokukhawulezisa yomyalelo, ngenisa lo myalelo ulandelayo: sfc / scannow Iya kuqala ukuskena ikhompyuter, ekungafuneki ukuba inde kakhulu. Xa ukukhangela kugqityiwe, vala iWindows Command Prompt kwaye uqalise inkqubo yokusebenza.
Nje ukuba wenze, uHlaziyo lweWindows lweWindows kufuneka lusebenze ngokufanelekileyo kwaye le mpazamo kufuneka ihambe. Qala kabusha iWindows Update Service ukuba indlela yokuqala ayincedanga, zama ukuqala kwakhona inkonzo yokuHlaziya yeWindows. Chwetheza 'iinkonzo' kwibhokisi yokukhangela, emva koko ufumane uHlaziyo lweWindows kwiWindows kwaye uyivule.
Kwifestile evulayo, qiniseka ukuba uhlobo lokuqalisa lusetelwe 'Zenzekelayo', yiyeke, kwaye uyiqale kwakhona. Ngaphandle koko, cofa ekunene kwinkonzo kwaye ukhethe 'ukuqala kwakhona'. Jonga ukuba impazamo enye iyenzeka kwakhona.
Ukubuyisela iiVenkile zoHlaziyo lweWindows yeWindowsNdlela yesibini yokubuyisela izinto kuHlaziyo lweWindows. Ukwenza oku, kuya kufuneka uyeke ii-BITS kunye neeNkonzo zoHlaziyo lweWindows. Emva koko qala isikhawulezisi somyalelo njengomlawuli kwaye ukhuphe le miyalelo ilandelayo nganye emva koko: Emva koko unike igama kwakhona iifolda zokuxhasa isoftware esasaziweyo usebenzisa le miyalelo ilandelayo: Emva koko bhalisa zonke iifayile zenkonzo yeBITS kunye noHlaziyo lweWindows yeWindows ngale miyalelo ilandelayo. ...
Emva kokubhalisa kwakhona, qalisa iinkonzo ezinqunyanyisiweyo zangaphambili, jonga inkcazo engezantsi kwinqaku kuluhlu lwayo yonke imiyalelo, kodwa ukuze uzigcinele ingxaki yokungena kuyo nganye nganye kwi-Prompt yomyalelo, kungcono ukwenza i-bat. fayile ngale miyalelo Ungajonga naliphi na inqaku lethu ukuze ubone indlela yokwenza ifayile enjalo kwaye ikhonkco lisezantsi phantsi kwenqaku. Ukubuyiselwa kwenkqubo ukuba impazamo iyaqhubeka kwaye into elandelayo onokuzama ukuyibuyisela kwinkqubo yakho.
Oku kunjalo, oku kunokwenzeka kuphela ukuba ulungiselele iinkqubo zokhuselo lwenkqubo kwaye wenza indawo yokubuyisela kwindlela yakho yokuqhuba. Ngena 'rstrui' kwibhokisi yokukhangela ukuze usebenzise eli nqaku, emva koko ucofe u-Okulandelayo, khetha indawo yokugqibela yokubuyisela, emva koko 'Okulandelayo' kunye no 'Gqiba'. ayizukuma de le nkqubo igqitywe.
chkdsk ukuthatha iintsuku
Ukuhambisa ukuGcinwa kweMifanekiso kunye noLawulo ukuba ngaba usabona le mpazamo kwiscreen sakho, sebenzisa ukuSebenza kweMifanekiso yokuSebenza kunye nesiXhobo soLawulo. Esi sixhobo sisebenza kwi-Command Prompt, ke qala njenge-admin kwaye ufake lo myalelo ulandelayo: I-DISM.exe / I-Intanethi / Ukucoca-umfanekiso / Ukubuyisela impilo Le nkqubo izakuthatha ixesha, ke linda ukuba igqibe ukusebenza xa ikhompyuter inokunxibelelana nayo i-intanethi.
Inkqubo izakuqala ukukhangela iingxaki, ukuba zikhona, ungazilungisa ngokunqakraza apha. Usebenzisa into eluncedo yomntu wesithathu, Ukulungiswa kweWindows Ukuba izixhobo ezakhelwe-ngaphakathi ziyasilela, kukho isixhobo sasimahla apha ukulungisa impazamo ye-Wind ows. Icala elisezantsi kuphela kukuba ayinayo inkxaso yeelwimi ezininzi, ke sisiNgesi kuphela.
Nabani na ojongana nokubuyiswa okuxakekileyo ziikhompyuter uya kuqonda izinto zemenyu (kwaye abo bantu ngenene ngabaphulaphuli ekujoliswe kubo), unokuzikhuphela kwiwebhusayithi esemthethweni ngokulandela ikhonkco phantsi kweli nqaku. Qalisa inkqubo kwaye wamkele isivumelwano selayisensi. Yiya kwithebhu 'yokulungisa' kwaye ukhethe 'ukulungiswa okuVulekileyo'.
Inkqubo kwiMowudi eKhuselekileyo, kwaye xa oku kusenzeka, iinkqubo zomntu wesithathu ezinjenge-antivirus yakho zinokungena kwindlela yokuzama ukulungisa iimpazamo. Ungasivala ngokukhuselekileyo esi silumkiso. Apha khetha 'uHlaziyo lweWindows lweWindows' kwaye ucofe ku 'Qalisa ukulungisa'.
ukuba inkqubo yokulungisa impazamo iqala; Xa kugqityiwe, uya kucetyiswa ukuba uqalise kwakhona inkqubo ukuze utshintsho luqale ukusebenza. Intsholongwane nayo inokubangela le ngxaki. Jonga ikhompyuter yakho kwi-malware.
Ndwendwela ijelo lethu ukuze ubone inqaku lokususa intsholongwane. Okokugqibela, ukuba onke amaqhinga awasebenzi, konke okuseleyo kukufaka kwakhona okanye ukuseta kwakhona inkqubo yokusebenza. Ndwendwela itshaneli yethu eneenkcukacha zokufunda ngendlela yokwenza oku, kwaye uya kufumana amakhonkco kule nkcazo ingezantsi.
Yiyo yonke loo nto okwangoku. Thumela uluvo ukuze usazise ukuba yeyiphi indlela ekuncedileyo ukusombulula ingxaki kwaye zeziphi ezinye iindlela ozaziyo. Hit the 'Like' iqhosha kwaye ubhalise kwisiteshi sethu.
Shiya iikhomenti ukubuza imibuzo. Enkosi ngokubukela. Umnqweno omhle.
Isebenziselwa ntoni i-Msxml DLL?
IiNkonzo zeMicrosoft XML Core (I-MSXML) ivumela usetyenziso olubhalwe kwiJScript, VBScript, kunye nezixhobo zophuhliso zeMicrosoft ukwakha usetyenziso olusekwe kwiWindows XML. Ixhasa i-SAX, iprosesa ye-XSLT 1.0, i-XML 1.0, i-DOM, inkxaso ye-XML ye-schema kubandakanya i-XSD kunye ne-XDR, kunye nezinye iitekhnoloji ezinxulumene neXML.
Ke ndiza kuqinisekisa ukuba ndilayisha lonke uxwebhu oluyi-Wholedata olusuka kuxwebhu ngoku qhubeka ukongeza amagqabantshintshi Layisha idatha yeFayile ye-WholeXML Qiniseka ukuba iyalayisha emva koko ndifuna ukuseta i-url ukuba indlela yefayile ilapho sifike khona olu xwebhu lufuna ukulanda kunye nokwenza ntoni ndiza kuthi xml indawo yokufunda kwaye ukhethe ukuhamba kuzo zonke ezi zinto kwaye ukhethe ukulayisha xml kwaye iyakwenza ntoni ukuba ilayishe i-xml kwindlela ethile kwaye indlela kufuneka ibe umtya njengoko kunokwenzeka Bona amandla kuthetha amanani angonobumba kunye noonobumba kwaye nditsho iikowuti eziphindwe kabini kuba ngumtya oyidilesi yefayile yam yeXML kwaye ndiyilayisha loo fayile kwiserver yam yewebhu kwaye sele ndiyazi idilesi endinayo Ngokusisiseko, njengoko ubona, ungenile kwaye ndiza kugqiba ukuba kunjalo, ke kuya kwenzeka ntoni ngoku umfundi weXML osebenzisa umthwalo we-Load-XML umthwalo weXML-Date i txt testXML endinayo apha kuwe, Ifayile yabaphathi kunye nedatha leyo ilayishwe kumfundi weXML kulungile ukuze sifumane idatha mandikubonise i-w Siza kwenza into esiza kuyenza, kwaye senze iwindow yethu ibe nkulu ngokubamba imouse yakho kulawo amachaphaza aluhlaza kwaye ngokusisiseko sikrola nje kobo bukhulu kwaye siza kufaka isicatshulwa sebhokisi yokubhaliweyo masiyibize idatha yeXML, kulungile kanjalo, ngoku masiyenze ngokuchanekileyo nqakraza kwifom yokukhetha ikhowudi yokujonga kwaye sithi idatha ye-xml eyibhokisi yethu yokubhaliweyo inombhalo wamachaphaza, ke iqulethe iirhafu, kukho ipropathi yelo dot ewe ewe akufuneki faka idatha ye-xml apha kodwa kufuneka siyibeke egameni kuba isicatshulwa 1 kwaye sifuna ukuqiniseka ukuba yidatha yeXML kwaye kulapho singabeka khona ulwazi lolwazi lweXML, ke kuya kufuneka unike igama indawo yakho yokubhaliweyo apha , ke inqaku ledatha yeXML kwaye iya kuthi iqanda Ezinye iipropathi kunye namaxabiso siza kuphinda sikhethe kwaye sikhangele isicatshulwa sithetha ukuba isicatshulwa esigcinwe kule nto imhlophe sinye kwaye ndifuna ukufana.
Kulungile kuba yimpazamo kuba khange siyigqibe inkqubo yethu yokuseta kwaye ndiza kuthi iXML r eader ngomzuzwana, olu luxwebhu lwethu lweXML ngokusisiseko kwimemori, njengoko, njengoko usazi, igcinwe kuguquguquko, ke yithi ixesha kwaye ndiza kukhetha isicatshulwa ukuze senze ntoni ukuzisa isicatshulwa ulwazi olugcinwe kwi-xml reader, uxwebhu lwe-xml ndizisa into yokubhaliweyo kwaye iya kungena kuloo bhokisi kuba le bhokisi ibhala eli xabiso Nantsi iyahambelana noxwebhu lonke lweXML, olungumfundi weXML kwinto ebhaliweyo, kunqakrazo olunye olwenziwe leli qhosha lokudlala kwaye kufanele ilayishe idatha yeXML, kodwa akunjalo? khange uyilayishe idatha okwangoku kuba kufuneka sibeke apha, kuthetha ukuba awuyilayishi iXML yerhafu kwaye uthi umba weXML, kuba kumcimbi wokubhaliweyo, phantsi kweXML, kukho imigaqo owaziyo ukuba uyayinika ilebheli , kwaye njengoko ubona mandi bonise phezulu ihave cool node designer node kunye nohlobo lwe-7.1 inqaku kwaye ndafumana ukurekhodwa kwe-murrowsarticle xa sisithi itekisi yombhalo kwaye icofa iqhosha lokubaleka, bekungenanto ngoba kutheni umfundi we-xml wayengazi ukuba yintoni Uhlobo lwesicatshulwa esifuna ukuluprinta kuba kuninzi okubhaliweyo kwinqaku elinye kwaye kufuneka sitsho i-xml ukuze inqaku elipheleleyo le-xml lishicilelwe libonisa ukuba kufuneka sinike inqaku esifuna ukulilayisha. Ayisebenzi ngale ndlela ke kufuneka ndiyenze njani loo nto? Guqula uvavanyo lokuba ifayile ye-xml ikwiserver kwaye uyabona ukuba ndinombhalo opholileyo wokuyila kwisicelo emva koko ndinomntwana emva koko ndinenqaku kwaye banomntwana kule nothi, uguqulelo 7.1 ukuze ndenze njalo ndiyakuthanda ukuya kule nqaku kumyili weqhosha elipholileyo kwaye ulayishe lo mntwana apha kwaye uyibonise njenge-atax ukuze ndenze njani? yenza oku, masihambe, ndiza kuxelela iXML Reader lonke uxwebhu lweXML olugcinwe kuguqulelo oluswelekileyo.
Ndiza kuthi khetha inqaku elinye, ke ndiza kuthi khetha inqaku kwaye ndiza kuchaza ukuba leliphi inqaku elizakuba kumtya wokuba kutheni ndivula iikowuti ezimbini xa ndibeka islaps esiphindwe kabini ngoluhlobo kutheni ngoba kuthetha ukuba siza kudlula kwisicelo kwaye akukho mfuneko yokuba sichaze oku ukuze izicelo zenze ezo zinto zimbini zibuyele umva apha kuthetha ukuba le yindlela yoxwebhu lweXML kwaye sifuna ukufumana le ndawo ngoku emva koku ngathi emva kwesi sithuba singathanda ukufumana into, ke ukusikwa kabini kwengcambu kuthetha usetyenziso kwaye ngoku ndiza kuthi iqhosha elipholileyo- uMyili yintoni le inqaku apha kwaye ndiza kuthi inguqulelo kuba akukho mcwangcisi Kuba uMyili une uphawu lwengxelo efana nomntwana njenge d Umhla wokukhutshwa kwaye ukuze ubone ukuba uhlobo luvaliwe kumyili weqhosha elipholileyo kwaye umyili weCoubertin akavaliwe okwangoku kuthetha ukuba lo ngumntwana okweli nqaku, qhubeka nje ufunde iifayile zeFayile yeXML kwaye funda isingeniso esisiseko sendlela yokwenza i-xml fi les kodwa ngokusisiseko ifayile ye-xml mandikubonise ukuba yeyiphi ifayile ye-xml yifayile ye-xml luxwebhu njengombhalo wefayile osisicatshulwa kuphela kwaye akukho nto iyenye kwaye okubhaliweyo kugcina kubo ukuba bamele ulwazi lwedatha kwaye ihlala iqala ngohlobo, ke Kuya kufuneka uyiprinte le khowudi apha kwaye emva koko ndiza kuyicima. Iqala ngamanqaku kunye nenqaku kwaye inokuba ngumntwana kunye nale nothi kwaye masithi mna nditsho uxwebhu lokuqala kwaye nditsho ulwazi lwabathengi kwaye ndithi uAlexander umbe kwaye awuvale nge-slash yokugqibela njengolu lwazi lwabathengi ndize ndivale inqaku elithi Uxwebhu 1 ngokusisiseko olu luxwebhu lwethu lweXML kwaye lunokuhamba ngolu hlobo, lunokuboniswa ngolu hlobo Indlela ofuna ngayo ukuba idlale indima kwizithuba, ke sinalo uxwebhu lweXML olunenqaku loXwebhu kwaye elinomthengi ophantsi ulwazi lweli nqaku kunye nexabiso lendawo engaphantsi yolwazi lwabathengi inexabiso lika-Alexander Moroz kwaye emva koko sivale uxwebhu ngelithi akusekho mntwana kule ndawo kwaye indawo ivaliwe. Yile nto uxwebhu olusisiseko lweXML lujongeka ngayo kwaye ugcine engqondweni ukuba uhlobo loxwebhu lweXML luyafana noxwebhu lwe-HTML.
Kodwa yirhafu kuphela. Le yirhafu. Irhafu ingaba yiyo nantoni na onokuthi uyenze, ungachaza ukuba ayifani ne-HTML iya kuba yi-html kwaye emva koko i-html izakuvalwa ayizukuba ungabeka ulwazi olunje kuxwebhu lwe-xml, inokuba yiyo nantoni na, ke inokuba yi-html kwaye iya kuba yi-html kwi-html.
Kuya kufuneka ulandele imigaqo kwaye ezi rhafu kufuneka zifane nemizimba ye-HTML oyaziyo ukuba inikwe ngolwimi lwe-HTML kwiXML enokuba yiyo nantoni na, ulwazi oluxabisekileyo, yintoni ixabiso lolu hlaselo okanye la manqaku? Ixabiso lenqaku lethu okanye inqaku lethu elincinci ngu-Alexander Monro ke oku kubaluleke kakhulu kumaxwebhu eXML ke ulwazi olusisiseko malunga nokuba uxwebhu lweXML luyintoni ukuze kunganyanzelekanga ukuba u-google ndiza kukunika nje intshayelelo encinci kwaye ngoku ndiyabona ngathi ndilalahlula eli nqaku kubini nge-youtube ngexabiso lomsebenzi wam onzima ke nalu ulwazi olusisiseko kuwe, ke, masibuyele kwinqaku lethu kwaye nolu uxwebhu lwethu olukhulu lweXML ndiza kukubonisa uxwebhu olusisiseko lweXML olunokubakho, kodwa kunokuba yinto enqabileyo yegolide njengalo mzekelo ke into endizama ukuyifunda ndizama ukufaka isicelo sam njengendlela kwaye ndafumana inqaku leqhosha lomyili kwaye ndingu Ndiya kwi-subnode okanye kwindawo yomntwana kwaye ndifuna ukufunda olu lwazi 7.1 Ungayenza njani into endiyithethayo kakhulu xa nditsho i-XML yedatha ichaphaza irhafu olu hlobo nantsi ibhokisi yombhalo elingana noxwebhu lweXML -Readerour XML, elayishwe kule Idilesi kwimemori yolu tshintsho, emva koko siklikhe kuyo kwaye sikhethe ipropathi Khetha iNdawo eNye kunye no-t ipropathi yakhe ikhetha indawo enye kwaye ukuba ucofa kule ndawo emva kokuba i-XMLreader izise zonke iiPropathi kwaye kuya kufuneka ukhethe indawo enye apha, kulungile iya kuqhubeka kwaye izise loo nto emva koko uphakame nje kanjalo kwaye uya yithi opholile uyilo leqhosha yile inqaku apha kwaye emva koko ndiye kule nguqulelo yomntwana kunye nohlobo, ke ndiza kufaka uxolo kuba ubonile ukuba le yindawo yamandla ebonisa ukuba ndisebenzisa eli nqaku lokufundisa kunye
/ Ungazilungisa njani iimpazamo ze-msxml.dll kwiWindows?
Ukusombulula ngokukhawuleza ingxaki yakho, sicebisa ukuba ukhuphele kwaye usebenzise msxml.dll Isixhobo sokuLungisa. Ukuba unamava obuchwephesha kwaye ufuna ukufaka ifayile yeDLL ngesandla, nceda ukhethe uguqulelo lwakho lweWindows kwaye ukhuphele msxml.dll, emva koko uyikopishe kwindawo efanelekileyo usebenzisa lo myalelo ungezantsi, uya kulungisa iimpazamo ze-dll. Yintoni i-Msxml.dll?
Ndingayikhuphela phi ingxelo yokugqibela yeMSXML?
Ukukhuphela ingxelo yamva nje ye-MSXML, jonga iphepha lokukhuphela le-XML kwiThala leeNcwadi le-Intanethi le-MSDN. Ukwakha isicelo esibhalwe kwi-C ++, ifayile ebhaliweyo ye-MSXML kufuneka ibandakanywe, kwaye iprojekthi kufuneka inxibelelane nelayibrari ye-MSXML.
Ungayibhalisa njani kwakhona i-msxml4.dll kumyalelo wokuyalela?
Chwetheza regsvr32 / u msxml4.dll, emva koko ucinezele u-Enter. Oku akuyi kubhalisa ifayile yakho. Chwetheza regsvr32 / i msxml4.dll, emva koko ucinezele u-Enter. Oku kuyakubhalisa kwakhona ifayile yakho. Vala i-Prompt Command. Qala kabusha inkqubo ehambelana nephutha le-msxml4.dll. Sigcine kwilogo kunye nesiphumo.
Ndiyifumana phi i-MSXML kumyalelo wokuyalela?
Ndingacebisa ukuba ubhalise inkqubo ye-MSXML. a. Cofa kuQala, yalathe kuzo zonke iiNkqubo, yalatha kwiiNkxaso, kwaye ucofe kwi-Command Prompt. b. Kwiwindows Command Prompt, thayipha Regsvr32 C: Windows System32 Msxml.dll, emva koko ucinezele ENTER.